Daawo Sawirrada: Hub Isugu jira Kuwa Darandooriga u dhaca ,Gantaalaha Garbaha laga tuuro iyo Basytoolado oo Dab lagu qabadsiiyay Fagaaro yaala Magaalada…… | Kismaayo24 News Agency
Saturday November 19, 2016 - 2:58 under Somali News by Tifaftiraha K24
In ka badan 5000 oo Qori oo isugu jira noocyada darandoorriga u dhaca, kuwo qadiimiga ah, Gentaallaha Garabka laga tuuro iyo Baastoolado,ayaa Maanta lagu gubay fagaare ku yaalla duleedka Caasimadda Dalkaasi Kenya ee Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa Qoryahaasi Debka la qabadsiiyay ku tilmaantay inay ahaayeen kuwo Sharci darro ahaa, waxanay Dadka laga soo uruuriyay u badnaayeen Beeraleey, Xoolo dhaqato iyo Reer Miyi, kuwaasoo mararka qaarkood u adeegsan jiray dagaal Beeleedyada.
Madaxweyne ku xigeenka Dalka Kenya William Ruto ,oo ka hadlay goobta lagu gubayay Qoryahan ayaa sheegay, in Hubka sharci darrada ah uu Dalkiisa ku yahay dhibaato weyn, amaankana uu qal qal aan la qiyaasi karin ku hayo.
“Waxan ugu baaqayaa muwaadiniinteenna inay Gacanta Dowladda soo geliyaan Hubka aan sharciga aheyn si aan idiin bad baadinno” Dowladduna uma dul qaadan doonto ka Ganacsiga Hubka noocyadiisa kala duwan, ayuu yiri William Ruto.
Dowladda Kenya ayaa wixii ka dambeeyay 2003-dii la dagaallamaysay Hubka sharci darrada ah, waxanay Sagaalkii Sano ee lasoo dhaafay Deb qabadsiisay in ka badan 20’000 oo Qori, markii ay Dalkaasi ka dillaaceen dagaallo ku salaysan aanooyin Qabiil.
Kenya ayaa sheegtay in Sanadkii 2007-dii oo keliya Dalkeeda si dhuumaalaysi ah lagu geliyay qiyaastii 100,000 oo Qori, Hubkaasoo sida ay tilmaantay Dowladdu kasoo gala xaduudaha uu Dalkeedu la leeyahay waddamada Soomaaliya, Itoobiya,Suudaan iyo Yugaandha.
2 thoughts on “Daawo Sawirrada: Hub Isugu jira Kuwa Darandooriga u dhaca ,Gantaalaha Garbaha laga tuuro iyo Basytoolado oo Dab lagu qabadsiiyay Fagaaro yaala Magaalada……”
Abu Sakariye 19th November 2016 at 4:20 pm
Fagaraha lagu gubay waa xage
Abu Sakariye 19th November 2016 at 4:21 pm
Oo maxa loogubay walal ma dadka laga gado